Microsoft ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Paul Allen အသက် ၆၅ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ
16 Oct 2018 . 11:05 AM
Microsoft လုပ်ငန်းစုကြီးကို Bill Gates နဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Paul Allen ကတော့ Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) ဆိုတဲ့ သွေးကင်ဆာနဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ သူသေဆုံးသွားချိန်မှာ အသက် ၆၅ ရှိနေပြီး Allen ဟာ အဆိုပါကင်ဆာရောဂါကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက စွဲကပ်နေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Paul Allen [Left] Bill Gates [Right]
Allen အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၇၅ မှာ Bill Gates နဲ့ Micosoft လုပ်ငန်းစုကြီးကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သွေးကင်ဆာ အစပျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ Allen ဟာ ၁၉၈၃ မှာပဲ Microsoft နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဒီလိုထွက်ခွာခဲ့ရပေမယ့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ Microsoft မှာပဲ Board Member အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Bill Gates (13) Allen (15)
၂၀၀၉ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Allen စွဲကပ်နေတဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာကို သွေးကင်ဆာမျိုးကွဲ (NHL) လို့ ပထမဆုံးပြဌာန်းခံရပြီး အဲ့ချိန်ကတည်းက တောက်လျှောက်ကုသလာခဲ့ရတာပါ။ Bill Gates နဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း တဖြစ်လည်း Paul Allen အခုလို သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ “ကျွန်တော့်အသည်းတွေ အစိတ်စိတ်၊ အမွှာမွှာကွဲသွားရသလိုပါပဲ၊ အရမ်းကို ချစ်ခင်ရတဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေ ချစ်သူငယ်ချင်းလေး အခုလိုထွက်ခွာသွားရတာ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ Bill Gates ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Microsoft နဲ့ အပြီးအပိုင် လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ နောက်ပိုင်း ရလာတဲ့အစုရှယ်ယာတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ Vulcan ကုမ္ပဏီဆီမှာ Investor ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒီ Vulcan ဟာ Machine Learning ပိုင်းအဓိကထား လေ့လာနေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်သလို အခြေတည်ထားတဲ့ Seattle ဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာ Allen ကြိုးစားမှုတွေက လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတု ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ Stratolaunch နဲ့ အာကာသလေယာဉ်တည်ဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာ Allen အငွေ့အသက်တွေ ထင်ကျန်နေဆဲပါ။
Bill Gates [Left] Paul Allen [Right]
ဒီလို Microsoft Foundation မှာလည်း ကုမ္ပဏီနာမည်ပေးတာနဲ့ Two-button Mouse ဖန်တီးတဲ့နေရာတွေမှာ အရေးပါခဲ့သလို Seattle မိဘမဲ့ဂေဟာ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေကို $46 သန်းအထိ မသေခင် ထောက်ပံ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
Tim Cook’s Condolences
အခုလို ထူးချွန်တယ်၊ နုလုံးရည်လည်းကောင်းတဲ့အတွက် Apple CEO “Tim Cook” နဲ့ Google CEO “Sundar Pichai” တို့က နည်းပညာဖခင်ကြီး “Tech Pionner” ဆိုပြီး Allen ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ၊ သုတေသနစင်တာတွေ၊ ထောက်ပံ့ရေးစတဲ့ ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းနည်းစကား ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
From when they were young to elderly age
လူသာသေသွားတယ်၊ ဘာလို့ Allen ကို Bill Gates ၊ Tim Cook နဲ့ Google CEO တို့ လေးစားရသလဲဆိုရင် Paul G. Allen Philanthropies ဆိုတဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် Website ကနေ $2 ဘီလီယံ ရှာနိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲ့ငွေအားလုံးကို အကျိုးပြုဖို့ပဲ သူစိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တယ်၊ ၂၀၀၃ မှာ Allen Institute for Brain Science ဆိုတဲ့ သုတေသန လုပ်ငန်းကိုသူပဲ တည်ထောင်ပေးခဲ့ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် $500 သန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။
Sundar Pichai’s Condolences
အဓိက လူဦးနှောက်ဘယ်လို လေ့လာနိုင်ဖို့ အားပေးအားမြောက်ပြုခဲ့သလို၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Allen Institute for Artificial Intelligence (A.I.) သုတေသနလုပ်ငန်းစုကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့ပြန်တယ်။ အခုလို A.I နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာလည်း လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစုအတွက်ဖြစ်ပြီး သူမသေဆုံးခင် အသားတင်ကြွယ်ဝမှုက $20.8 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ လက်ရှိ Allen Institute CEO “Allan Jones ပြောသွားတဲ့အချက်က “Paul Allen ဟာ တကယ့်ကို ထူးချွန်တဲ့ ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ၊ သူ Guitar တီး အရမ်းကျွမ်းတယ်လေး” ဆိုပြီး နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားနဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေ Seattle မြို့ကလေးမှာပဲ ထာဝရအနားယူသွားခဲ့ပါပြီ။
R.I.P “Paul Allen: 1953 – 2018″
Microsoft ကိုပူးတှဲတညျထောငျသူ Paul Allen အသကျ ၆၅ နှဈမှာ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီ
Microsoft လုပျငနျးစုကွီးကို Bill Gates နဲ့ ပူးတှဲတညျထောငျသူ Paul Allen ကတော့ Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) ဆိုတဲ့ သှေးကငျဆာနဲ့ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါပွီ။ သူသဆေုံးသှားခြိနျမှာ အသကျ ၆၅ ရှိနပွေီး Allen ဟာ အဆိုပါကငျဆာရောဂါကို ၁၉၈၃ ခုနှဈကတညျးက စှဲကပျနခေဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
Allen အကွောငျးပွောရမယျဆိုရငျ ၁၉၇၅ မှာ Bill Gates နဲ့ Micosoft လုပျငနျးစုကွီးကို ပူးတှဲတညျထောငျခဲ့ကွပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ သှေးကငျဆာ အစပြိုးနပွေီဖွဈတဲ့ Allen ဟာ ၁၉၈၃ မှာပဲ Microsoft နဲ့ လကျတှဲဖွုတျခဲ့ပါတယျ။ သူဒီလိုထှကျခှာခဲ့ရပမေယျ့ ၂၀၀၀ ခုနှဈအထိ Microsoft မှာပဲ Board Member အနနေဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
၂၀၀၉ ရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ Allen စှဲကပျနတေဲ့ ကငျဆာဝဒေနာကို သှေးကငျဆာမြိုးကှဲ (NHL) လို့ ပထမဆုံးပွဌာနျးခံရပွီး အဲ့ခြိနျကတညျးက တောကျလြှောကျကုသလာခဲ့ရတာပါ။ Bill Gates နဲ့ ငယျသူငယျခငျြး တဖွဈလညျး Paul Allen အခုလို သဆေုံးသှားတဲ့အခါမှာတော့ “ကြှနျတေျာ့အသညျးတှေ အစိတျစိတျ၊ အမှာမှာကှဲသှားရသလိုပါပဲ၊ အရမျးကို ခဈြခငျရတဲ့ ငယျကြှမျးဆှေ ခဈြသူငယျခငျြးလေး အခုလိုထှကျခှာသှားရတာ” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးကွကှေဲစှာ Bill Gates ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Microsoft နဲ့ အပွီးအပိုငျ လမျးခှဲခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ နောကျပိုငျး ရလာတဲ့အစုရှယျယာတှေ၊ ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ Vulcan ကုမ်ပဏီဆီမှာ Investor ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ၊ ဒီ Vulcan ဟာ Machine Learning ပိုငျးအဓိကထား လလေ့ာနတေဲ့ ကုမ်ပဏီဖွဈသလို အခွတေညျထားတဲ့ Seattle ဆိုတဲ့မွို့ကလေးမှာ Allen ကွိုးစားမှုတှကေ လူသိမြားလာခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရာသီဥတု ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲ၊ Stratolaunch နဲ့ အာကာသလယောဉျတညျဆောကျတဲ့နရောတှမှော Allen အငှအေ့သကျတှေ ထငျကနျြနဆေဲပါ။
ဒီလို Microsoft Foundation မှာလညျး ကုမ်ပဏီနာမညျပေးတာနဲ့ Two-button Mouse ဖနျတီးတဲ့နရောတှမှော အရေးပါခဲ့သလို Seattle မိဘမဲ့ဂဟော၊ အိုးမဲ့အိမျမဲ့တှနေဲ့ ဆငျးရဲတဲ့မိသားစုတှကေို $46 သနျးအထိ မသခေငျ ထောကျပံ့သှားခဲ့ပါသေးတယျ။
အခုလို ထူးခြှနျတယျ၊ နုလုံးရညျလညျးကောငျးတဲ့အတှကျ Apple CEO “Tim Cook” နဲ့ Google CEO “Sundar Pichai” တို့က နညျးပညာဖခငျကွီး “Tech Pionner” ဆိုပွီး Allen ဖနျတီးခဲ့တဲ့ အနုပညာလုပျငနျးတှေ၊ သုတသေနစငျတာတှေ၊ ထောကျပံ့ရေးစတဲ့ ပွညျသူအကြိုးပွုလုပျငနျးတှကွေညျ့ပွီး သူတို့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ဝမျးနညျးစကား ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
လူသာသသှေားတယျ၊ ဘာလို့ Allen ကို Bill Gates ၊ Tim Cook နဲ့ Google CEO တို့ လေးစားရသလဲဆိုရငျ Paul G. Allen Philanthropies ဆိုတဲ့ သူ့ကိုယျပိုငျ Website ကနေ $2 ဘီလီယံ ရှာနိုငျခဲ့တယျ၊ အဲ့ငှအေားလုံးကို အကြိုးပွုဖို့ပဲ သူစိတျအားထကျသနျနခေဲ့တယျ၊ ၂၀၀၃ မှာ Allen Institute for Brain Science ဆိုတဲ့ သုတသေန လုပျငနျးကိုသူပဲ တညျထောငျပေးခဲ့ပွီး သိပ်ပံပညာရှငျတှေ၊ ကြောငျးသားတှအေတှကျ $500 သနျးထောကျပံ့ပေးခဲ့တယျ။
အဓိက လူဦးနှောကျဘယျလို လလေ့ာနိုငျဖို့ အားပေးအားမွောကျပွုခဲ့သလို၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ Allen Institute for Artificial Intelligence (A.I.) သုတသေနလုပျငနျးစုကွီးကို တညျထောငျခဲ့ပွနျတယျ။ အခုလို A.I နညျးပညာဖှံ့ဖွိုးဖို့ဆိုတာလညျး လူသားအကြိုးပွုလုပျငနျးစုအတှကျဖွဈပွီး သူမသဆေုံးခငျ အသားတငျကွှယျဝမှုက $20.8 ဘီလီယံရှိပါတယျ။ လကျရှိ Allen Institute CEO “Allan Jones ပွောသှားတဲ့အခကျြက “Paul Allen ဟာ တကယျ့ကို ထူးခြှနျတဲ့ ဂီတပညာရှငျတဈယောကျပါ၊ သူ Guitar တီး အရမျးကြှမျးတယျလေး” ဆိုပွီး နောကျဆုံးနှုတျဆကျစကားနဲ့ ဇာတိခကျြကွှေ မှေးရပျမွေ Seattle မွို့ကလေးမှာပဲ ထာဝရအနားယူသှားခဲ့ပါပွီ။